ကမ္ဘောဒီးယား (12) မြန်မာ (7) ဗီယက်နမ် (7) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (6) ထိုင််း (6) 142 (1)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (13) ခမာဘာသာစကား (6) လာအို (1) ဗမာဘာသာစကား (1)
CSV (12) XLSX (1)
Open Development Me... (8) Open Development Ca... (5)
သတင်းအချက်အလက်များ ... (13) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်... (5) အုပ်ချုပ်ရေး (3) ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ (2) လူထုနှင့် အုပ်ချုပ်... (2) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင... (1)
CC-BY-4.0 (6) Creative Commons At... (3) Creative Commons At... (2) CC-BY-3.0-IGO (1) CC-BY-SA-4.0 (1)
ခေါင်းစဥ်များ: Access to information None: dataset
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2016၊ 18 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: The Library of Congress 101 Independence Ave, SE Washington, DC... သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2020၊ 30 ဇွန် ရင်းမြစ်: Various sources are utilised to compile this list and all effort... သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊ 29 ဇွန် ရင်းမြစ်: သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
2019၊ 14 နိုဝင်ဘာ ရင်းမြစ်: Original data sourced from... သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
ISO 3166-1-alpha-2 English country names and code elements. This list states the country names (official short names in English) in alphabetical order as given in ISO 3166-1 and...
ကမ္ဘောဒီးယား 2019၊ 19 မတ် ရင်းမြစ်: The Community Service Mapping is shared by Health Action... ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ, လူထုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းအတွက် ဥပဒေရေးရာ ၀န်ဆောင်မှုများ, သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
This spreadsheet is developed from information gathered from the Community Service Mapping which is produced under the collaboration between HIV/AIDS Coordinating Committee and...
ODM License list
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2016၊ 19 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: Open Development Initiative (ODI) သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
The CSV file containsalist of all licenses that the ODM site has come across when loading resources into CKAN.
Agreements Document Type
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2017၊ 20 ဖေဖော်ဝါရီ ရင်းမြစ်: Agreements document type is determined by the ODM team. သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
Data used for dropdown options in the Agreements metadata forms. Definitions of each term is provided and also available within the Partner wiki...
List of Provinces for ODM target countries (ISO-3166-2)
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2016၊ 18 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: ISO 3166 Maintenance Agency;... သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
Provincial codes for Thailand, Myanmar, Lao, Vietnam and Cambodia, provided by ISO-3166-2 as well as Federal Information Processing Standard (FIDS-10-4) and Geopolitical...
ODM Library resources document types
The table containsalist of ODM document types categorising all documents and resources in the ODM library.